Baarlamanka Soomaaliya oo sharciyo kasoo saaraya Warbaahinta dalka
Home Somali News Somali Government Baarlamanka Soomaaliya oo sharciyo kasoo saaraya Warbaahinta dalka
Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, oo shalay shir gudoominayay shir ay mudanayaasha baarlamanka ku yeesheen magaalada Muqdisho, ayaa soo hadal qaaday qodob aad muhiim u ah, kaasoo ahaa in sharciyo loo sameeyo warbaahinta dalka ka howlgasha qaybaheeda kala duwan.
Maxamed Cismaan Jawaari, waxa uu ka dhawaajiyay in warbaahinta gudaha ka howlgasha lagu xadgudbo oo dhibaatooyin kala duwan loo gaysto iyagana ay qaladaad farabadan galaan sidaas darteedna loo baahanyahay in baarlamaanka ay sharciyo kasoo saaraan.
“Warbaahinta iyo Media-ha Soomaaliyeed, dhaliilo badan baa kajira, waa Suxufiyiinta oo aan la’ixtiraamin iyo iyagoo laftirkooda xilkooda aan si wanaagsan ugudan, marka labadaba way jiraan, sidaas daraadeedna wixii maanta ka bilaawda waxaan aad ujeclahay in aan farno gudiyada ku shuqulka leh warbaahinta ineey si aad ah u tafaftiraan, sharciyo adagna laga soo saaro inaan lagu xadgudbin wariyaha iyagana ay dad ku xadgudbin” ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka.
Hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo aaday xili shalay ay baarlamaanka Su’aalo weydiiyeen wasiirka Gaashaandhiga oo ku saabsanaay sababta ay maxkamada Ciidamada qalabka sida u xirtay wariyaha BBC-da uga warama magaalada Muqdisho ee Ibraahim.
Waa markii ugu horeeysay ee mudanayaasha baarlamanka ay sheegaan ineey sameeynayaa shuruuc lagu ilaalinayo xuquuqda Saxafiyiinta kahowlgasha magaalada Muqdisho.
Saxafiyiinta kahowlgala Warbaahinta dalka, ayaa iyagu waxaa lasoo gudboonaada dhibaatooyin aad ufarabadan oo isugu jira, dilal, xarig iyo caga jugleyn, waxaana dhibaatada ugu badan ugeysta wariyayaasha Al-shabaab oo iyagu cadeystay dhowr fal danbiyeed oo lagula kacay saxafiyiinta.